NUG အစိုးရက မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များကို ICC တရားရုံးမှ တစ်ဆင့် အရေးယူရန် လိုလားပြင်ဆင်နေဟု ကုလလူ့အခွင့်အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူပြောဆို
စစ်အုပ်စုက ယနေ့ ပြည်သူကို အာဏာ ပြန်အပ်လျှင် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ရင်ဆိုင်ရန် CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားလုံး အလုပ်ပြန်ဆင်းမည်ဟု ခွဲစိတ်ပါရဂူ ဗိုလ်ကြီး မင်းမောင်မောင်ပြော
NCA ရဲ့စံတန်ဖိုးတွေကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားပေမယ့် စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟု ခွန်ဥက္ကာဆို
တရားဝင်အစိုးရ ကိုဗစ်ကာထိန်းကု ဖွဲ့ပြီ
NUGက COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်
ထားဝယ်မြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၊စခကား ၅စီးလာ၊ ၂စီးမိုင်းခွဲ့ခံရ၊ အနည်းဆုံး ၅ ယောက်ခန့်သေ
ရေဦးတွင် စစ်ကောင်စီ၏ ကင်းလှည့်ယာဉ်တန်းကို PDF ဝင်တိုက်၊ ရဲတစ်ဦးသေဆုံးပြီး PDF ဘက်မှလည်း တစ်ဦးကျဆုံး
ထားဝယ်၊ ရောင်းမော်ရွာတွင် PDF များနှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ယောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် လက်နက်နဲ့ ရိက္ခာလိုအပ်နေ
မြို့သစ်မြို့နယ်၊ ကိုရံ(တောင်)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖိုးကောင်း ဂျင်ကလိဖြင့် ၇ ချက် အပစ်ခံရပြီး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရ
မင်းတိုင်ပင်ရွာတွင် ဦးသန်းလွင်(ဒလန်)သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရ၍ ဒဏ်ရာရရှိ
ဖားကန့် အေးမြသာယာရပ်ကွက် စာသင်ကျောင်းအနီး မနေ့ညက ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့
ဒေါ်သက်သက်ခိုင်၏ ရွှေနန်းတော် ရွှေဆိုင် ဗုံးခွဲခံရ၊ အရောင်းဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
မင်းတပ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို စားနပ်ရိက္ခာ သယ်ယူခွင့် စစ်ကောင်စီက ပိတ်ပင်ထား
ဆောမြို့နယ် စစ်ရှောင်စခန်းက ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ
တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင် မုံးကိုးဒေသခံ ၃၀၀ ကျော် စားဝတ်နေရေး အခက်ကြုံ
အင်းစိန်တွင် စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးထားသော လူငယ် ၆ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ၊ စစ်ကားကို ဗုံးပစ်သွင်းဟု စွပ်စွဲခံရသူကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်သေဆုံးဖွယ်ရှိ၍ မိသားစု စိုးရိမ်နေ
မြောင်မြို့တွင် စစ်ကောင်စီခန့် ဆွဲလဲအိုရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အရပ်သား ၁ ဦး သတ်ခံရမှု ရွာသား ၁၀ ဦးကို စစ်တပ်က ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွား
ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၌ စစ်ကားဝင်တိုက်သဖြင့် အမျိုးသား ၁ ဦး အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရ
မိုးကုတ်မြို့က ဖမ်းဆီးခံ လူငယ် ၆ ဦး မိသားစုနှင့်တွေ့ခွင့်မရ
ဝိုင်းမော်စုပေါင်းဂိတ်တွင် စစ်တပ်ကပစ်ခတ်သဖြင့် ပြည်သူ ၁ ဦး သေဆုံး
မော်လမြိုင်တွင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်အပါအဝင် ၁၁ ဦးကို ခြိမ်းခြောက်စာကပ်
စစ်ကြောရေးမှာ သေဆုံးသူ အယောက် ၃၀ ရှိလာ၊ နောက်ဆုံး သေဆုံးသူ နှစ်ဦး ရုပ်အလောင်းပြန်မရ
မနေ့က ကျောက်မဲတွင် စကစထောင်ထားသော မိုင်းနင်းမိ၍ ၁ ဦးသေ၊ ၁ ဦးဒဏ်ရာရ
ဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲဖြစ်ထွန်းမှု ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းထက် ပိုမြန်နေဟု WHO သတိပေး
ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအစည်းအဝေး တက်တဲ့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရ
လပွတ္တာမြို့မှာ အသက်၅၀အောက် ကိုဗစ်လူနာတွေကို အိမ်ပြန်လွှတ်
မကွေး၌ စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းမိသားစုအပါအဝင် ၁၁၇ဦး စံချိန်တင်တွေ့
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ မိုင်ဂျာယာန်မှာ COVID -19 အတည်ပြုလူနာနှစ်ဦးတွေ့
KIOထိန်းချုပ်နယ်မြေ၌ COVIDတွေ့၍ စာသင်ကျောင်းနှင့် ဘာသာရေးကျောင်း တပတ်ပိတ်
မန္တလေး၌ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းထိ COVIDဖြင့်သေဆုံးသူ ၂၂ဦးရှိ
ဒီကနေ့ တွေ့ရှိမှု ၄၁၃၂ ဦး နဲ့ သေဆုံးသူ ၅၁ ဦး ရှိ
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Google Service ကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုခွင့် Google က ကန့်သတ် ပိတ်ပင်
စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၅ လကျော်အကြာ တယ်လီနောဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာ
တယ်လီနောကို ဝယ်ယူသည့် M 1 Group သည် စစ်တပ်၏ မိတ်ဖက် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖြစ်နေ
စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် အခွန်တွေကောက်ခံနေတဲ့ ရုံးတွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ ပဲခူး PDF ကြေညာ
NUGကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ လူကြီးရောဂါနဲ့ ဆုံးပါးသွား
စစ်ကောင်စီက မီတာမဆောင်သည့် အိမ်များ၊ လုပ်ငန်းများ၏ စာရင်း တင်ပြခိုင်းထားဟု ဆို
ဗဟိုဘဏ် $ ၆သန်းထပ်ရောင်း၊ လေးရက်အတွင်း ကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း ဗဟိုဘဏ် ထုတ်ရောင်းခဲ့
စစ်တပ်နဲ့ရဲရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ICC က အရေးယူစေချင်ကြောင်း နစ်နာသူတွေပြော
ကမာရွတ် ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာတွင် အကြမ်းဖက် လက်နက်ကိုင်များခြံရံပြီး EPC မှ မီတာခများ လိုက်ကောက်နေ
ကိုလျှံဖြိုးအောင်ရဲ့ အမှုရုပ်သိမ်းပေးဖို့ အသနားခံစာ တင်သွင်းမည်
ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ် (၁၀) မြို့နယ်ကို stay at home သတ်မှတ်
နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသူ ၈၉၈ ဦးနှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရသူ ၅၁၂၇ ဦးရှိဟု AAPPထုတ်ပြန်ထား
ဆားခါးရွာမှ ကိုဖြိုးလှိုင်ဝင်းကို မနေ့ညက စစ်ကောင်စီတပ်များက အကြောင်းမဲ့ ပစ်သတ်
မြင်းခြံအထွက် ညောင်ဦးဘက် ကုန်ကားသုံးစီး အရပ်ဝတ်နဲ့ဖမ်း၊ကုန်များဖောက်ချစစ်ဟုသိရ
ည ၇နာရီခန့်ထနောင်းတိုင်ကျောင်းမှ စခများကို ပျူစောထီးများဗုံးပစ်ဟန်ဆောင်၊ သေနတ်များပစ်ဖောက်ခဲ့
စစ်ကောင်စီရောင်းစားမည့် နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦများဝယ်ယူပါက ပြန်သိမ်းမည်ဟု NUG ကြေညာ
ဝိုင်းမော်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ် ခမရ ၃၂၁ ကို KIA က လက်နက်ကြီးများဖြင့် တိုက်ခိုက်
ကသာတွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် KIA PDFပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၊ စကစဘက်မှ သေဆုံးမှုများ
မြို့လှဘက်ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က ဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ အချက်ပေါင်း ၃၅ထက်မနည်း လာရောက်ပစ်ခတ်
ချောင်းဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ အခွန်အခကောက်ခံနေကြသော ဖက်ဆစ်လက်ပါးစေများကို သတိပေး
စစ်ကောင်စီ၏ သွေးခွဲမှုကိုသတိထားရန် KIAပြော
ကယား လူထုအပေါ်အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်လျှင်တိုက်ပွဲပြန်စနိုင်ဟု KNDFပြော
လမ်းမတော်၊ ကမ်းနားလမ်းရှိ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ အလွန်ကျယ်လောင်ပြီး EPC ရုံးခေါင်မိုးများ လန်ထွက်သွား
ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ ယနေ့ မနက်ပိုင်းက ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့
ဖားကန့်မြို့နယ်က ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲ
မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးတွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ဗုံးပေါက်
စမ်းချောင်း EPC ရုံးတွင် ဗုံးပေါက်
ရန်ကုန်မြို့ အကောက်ခွန်ရုံးချုပ် အနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
မီတာခပေးဖို့ ဖိအားပေးပြီးနောက် သုံးရက်အတွင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ရုံးရှစ်ခု ဗုံးကွဲ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ကလေးငယ်တစ်သန်းနီးပါး ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့် ဆုံးရှုံးနေ
အဖမ်းခံရတဲ့ သံဃာတော်တွေကိုပါ အပြင်းအထန် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရ
နယူးဇီလန်ရောက် မြန်မာပညာတော်သင် ကျောင်းသားများကို စစ်ကောင်စီကို သစ္စာခံရန် ခြိမ်းခြောက်ဖိအားပေး
ကင်ဆာဆေးသွင်းနေရသည့် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ထောင်ဆေးရုံတွင် ကုသခွင့်မရ
သင်ကြားမှုတွေဆက်ရှိနေဖို့ CDM ဆရာဆရာမတွေ ကြိုးပမ်း
မြန်မာအရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေနဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တွေ့ဆုံ
မြန်မာ့အရေး ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်ဖို့ ညွှန့်ပေါင်း အဖွဲ့ ဖွဲ့ဖို့ တွမ်အင်ဒရူးတိုက်တွန်း
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး နောက်ကြောင်းပြန်သူတွေကို အရေးယူနိုင်ရေး အမေရိကန် အားပေးတဲ့အကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘလင်ကင် ပြောဆို
မြန်မာပြည်မှာ ၆ လ အတွင်း လူတွေ သန်းချီငတ်မွတ်နိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ တွက်ဆထား
ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးမှုများရပ်တန့်ရန် အမေရိကန်ရှေ့နေအသင်း တောင်းဆို
ခင်ဦးမြို့နယ်က ပျူစောထီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ပစ်သတ်ခဲ့ဟု မိုးကြိုးမုန်တိုင်းအဖွဲ့ပြော
ရန်ကုန် သုံးခွမြို့ ဘုရားကြီးစံပြရွာကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ကြီး သုတ်သင်ခံရ
ကနီစစ်ရှောင် ၂ သောင်းကျော် ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါး အကူအညီလိုအပ်နေ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးရတဲ့ ဒုက္ခသည် လေးထောင်ကျော်ရှိလာ
ဧရာဝတီ ကန်ကြီးထောင့်မြို့တွင် COVIDလူနာထားစရာနေရာမရှိ၍ ဆေးစစ်ပေးခြင်းရပ်နား
ကလေးမြို့ အေးရိပ်မွန်မိဘမဲ့ဂေဟာကကလေး ၃၄ဦး COVIDတွေ့
မန္တလေးမှာ အောက်ဆီဂျင် စျေး ၂ဆတက် ပစ္စည်းပြတ်
အုတ်ဖိုမှာ ၁ရက်တည်း ကိုဗစ်လူနာ ၄ ဦးသေဆုံး
ပုသိမ်မှာ တစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်လူနာ ၁၃ဦး သေဆုံး
မြဝတီမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ ၄၆၀ ကျော်နှင့် သေဆုံးသူ ၁၇ဦးထိ ရှိလာ
နေပြည်တော် စကစရုံးများတွင် COVIDကူးစက်မှုဆိုးဝါးလာ
ကလေးမြို့ကို အောက်ဆီဂျင် ဝင်ရောက်မှုနည်းနေလို့ အလှည့်ကျသာဖြည့်ပေးနေရ
တပ်ရင်း ၆ ရင်းလောက် စုထားတဲ့ လှည်းကူးမြို့ ရဲမွန်တပ်မြို့ ထဲမှာ ကိုဗစ်လူနာအချို့ရှိလာ
ယနေ့ ကိုဗစ်ကူးစက်သူ အသစ် ၄၃၂၀ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၆၄ ဦး ရှိ
ချောက်ခလရ ၁၃ တပ်ရင်းမိသားစုမှ ကလေးငယ်များအပါအဝင် ယောင်္ကျားလေးများကို အတင်းအကျပ် စစ်သင်တန်းတက်ခိုင်း
မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကို စွဲချက်တင်အမိန့်ချ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးညီပုကို စစ်ကောင်စီ တရားရုံးက နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုဖြင့် စွဲချက်တင်
ရုရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လာပြီး ပျောက်နေသည့် စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင် ယနေ့ ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်ရေး အစည်းအဝေး တက်ရောက်
ကျောင်းကုန်းက အမျိုးသမီးကိုသတ်ဖြတ်ကာ ပစ္စည်းလုယူသွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လူ ၂ ဦးကို ဖမ်းထား
မုဒုံမြို့က ပျောက်ဆုံးနေသည့် ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးကို သေဆုံးလျက် ပြန်တွေ့
မန္တလေးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ ထပ်မံတရားစွဲခံရ
တနိုင်ငံလုံးက ကျောင်းတွေ ယာယီပိတ်ထားဖို့ စစ်ကောင်စီ ကြေညာ
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှာ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်သူအများစုဟာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဖြစ်
လျှပ်စစ်မီတာခတွေ ပုံမှန်ပြန်လည်ပေးဆောင်ဖို့ စစ်ကောင်စီ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်လာ
နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသူ ၈၉၉ ဦးနှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရသူ ၅၁၄၁ ဦးရှိဟု AAPPထုတ်ပြန်ထား
မနက်ခင်း၁၁နာရီခန့်က ထနောင်းတိုင်ရွာ လူငယ်တစ်ဦးကို စခများ ဖမ်းဆီးသွား၊ ဖမ်းဆီးခံရသူတစ်ဦးနှင့် ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရှိ၍ဟုသိရ
ညနေက ထနောင်းတိုင်တောင်ဘက် မြစ်ရေတင် site3အနီးမှ ခြံပိုင်ရှင်တစ်ဦးအား စခများ ဖမ်းဆီးသွား
ရွှေကူ ၊ မြို့လှ တိုက်ပွဲ တွင် KIA နှင့်အတူ မြင်းခြံ PDF တချို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြောင်း သိရှိရ
မကျည်းပင်စုမှ ပျူစောထီးဟု စွပ်စွဲခံရသူ အသတ်ခံရ
ဗြိတိန်အခြေစိုက် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ Charities Aid Foundation (CAF)က ထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အလှူဒါန အရက်ရောဆုံးနိုင်ငံအညွှန်းကိန်း (World Giving Index)မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေပြီး အရင်က ထိပ်ဆုံးမှာ နှစ်စဉ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ စတုတ္ထနေရာထိ ကျဆင်းသွားခဲ့
"စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုသူမိသားစုက ကျွန်ဝယ်ရာအစစ်ပါ။ အရာရှိအိမ်မှာ ထမင်းချက်ဈေးဝယ် အဝတ်လျော်ပေးရတယ်။ စစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့ပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထု ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အမိန့်တွေကို ဖီဆန်ရဲတဲ့သတ္တိရှိရပါ့မယ်။ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာ စစ်တပ်မရှိလို့ ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး" စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်း
မှ Captain Zero ပြော
"စစ်အုပ်စုက ဘုရားတွေတည်ပြတယ်၊ ကျောင်းတွေ ဆောက်တယ်၊ အဲလိုနဲ့ သူတို့တွေက ဒီသာသနာကြီး မပျောက်ပျက်အောင် စောင့်ရှောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒ မှိုင်းကြီးကို ရိုက်သွင်းထားတာပေါ့၊ အဲဒါကို ဘာသာရေးအသိမကြွယ်တဲ့ ရဲဘော်တွေ ရဲမေတွေက အဟုတ်ကြီး မှတ်နေကြတာ "
တပ်မတော်ဆေးတပ်မှ CDM ခွဲစိတ်ပါရဂူ ဗိုလ်ကြီးမင်းမောင်မောင်
စစ်ကောင်စီက အောက်စီဂျင်အသက်ရှုစက် Oxygen Concentrator တွေကို FDA ထောက်ခံချက်မလိုဘဲ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်ပေမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ ကိုဗစ်အရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေက ပြော
ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေတွေပိုဆိုးအောင် စစ်ကောင်စီက တွန်းပို့နေတယ်လို့ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတဲ့ ဆရာဝန်တွေက ဝေဖန်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည့် ဦးတိုးအောင်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်အဖြစ် အတည်ပြု ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်ဟု တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ရေနံနဲ့ ရေထွက်ပစ္စည်းတွေဆိုင်ရာ အခွန်အခတွေကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်း NUG ကြေညာ
မြို့လှတိုက်ပွဲများတွင် စကစမှ စခ ၂၀၀ခန့်သေဟု KPDFထုတ်ပြန်
ကရင်အမျိုးသားအစည်းရုံးလက်အောက်ခံ KNDO ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်နယ်ဒါးမြနဲ့ ဗိုလ်ကြီးစောဘာဝါး တို့ကို KNUက တာဝန်မှ ဆိုင်ငံ့
ရန်ကုန်တွင် Yangon Urban Guerrillas အမည်ဖြင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ၁၄ ဖွဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့
လွတ်မြောက်နယ်မြေအတွင်းက PDF သင်တန်းမှာ အဆင့်မြင့်ဆေးခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်မည် ၊ CDM ဆရာဝန် ၂ဦး ကုသပေးမည်
စစ်သင်တန်းဆင်းသူ ၄၀၀၀ ကျော် ရှိနေပြီဟု ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးဆို
CDF-KKG အနေဖြင့် NUG မှဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားသည့် PDF တပ်နှင့်ပူးတွဲ၍ စစ်ကောင်စီအား ခုခံတိုက်ခိုက်မည်
ရှမ်းပြည်တွင်း လတ်တလော တိုင်းရင်းသားတပ်ချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ ဒေသတွေဟာ တရုတ်စီမံကိန်းတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ နေရာတွေဖြစ်နေ
မကွေးတိုင်း၊ ရေစကြိုမြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံးမှာ ဒီကနေ့ ညနေ ၃ နာရီလောက်က ဗုံး ၁ လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့
ရွှေပြည်သာမီတာရုံး ဒုတိယအကြိမ် ပေါက်ကွဲမူဖြစ်
မန္တလေးရှိ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံး၊ အမရပူရမြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံးတို့မှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့
ပဲခူးတွင် စစ်ကောင်စီခန့် ရာအိမ်မှူး ၁ ဦးနှင့် သူငယ်ချင်း ၁ ဦး ပစ်သတ်ခံရ ၊ အခြား အပေါင်းအပါ ၁ ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိ
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်မှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး သေနတ်ပစ်ခံရပြီး သေဆုံး
ယမန်နေ့ညနေက စစ်ကောင်စီခန့် ကျေးရွာအုပ်ကြီး ကန့်ဘလူတွင် ပစ်သတ်ခံရ
မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟိုပင်မြို့တာဝန်ခံလည်းဖြစ်၊ ရာအိမ်မှူးလည်းဖြစ်သူ ဦးရေခဲ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ
ဒီပဲယင်းနယ် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ဆေးဝါးသာ အဓိကအကူအညီ လိုအပ်ဟုဆို
နမ့်ခမ်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများ အဝင်အထွက် ကန့်သတ်
လောင်းလုံးတွင် ဖမ်းဆီးလိုသူမမိ၍ မြေးအဖွားနှစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီက ဓားစာခံ ဖမ်းဆီး
ကနီနယ်၊ကျေးရွာများတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ သောင်းကျန်းနေ
ချောင်းဉီးမြို့နယ်သပိတ်ခေါင်းဆောင် မာန်ဇာမြေမွန်(ခ)မိုးသီးဇွန် စစ်ကြောရေးတွင် လက်ချောင်းများအားလုံး အထက်ကို လှန်ချိုးခံခဲ့ရ
ဂွမြို့နယ် ဒေါင်းချောင်းရွာက ပြည်သူနှစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
ကလေးတက္ကသိုလ် CDM Support Team ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာ
စားဝတ်နေရေး အပါအဝင် ဘဝရပ်တည်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိလာပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ မတက်မချင်း CDM ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ မော်လမြိုင်က CDM မီးရထားဝန်ထမ်းတွေက ပြောဆို
သာပေါင်းရဲစခန်းတွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ချင်း(ဂျင်း)ပြုတ်ရည်တိုက်
တောင်ကြီး စစ်ကောင်စီတပ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်သူများပြားနေ
တောင်တွင်းကြီးမြို့က ကိုဗစ်လူနာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် အလှူရှင်မရှိ
မကွေးတိုင်း ၊ မြို့သစ်မြို့မှာ ကျောင်းဆရာမထံမှ ကျောင်းသား ၉ ဦး Covid-19 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရ
ကချင်ပြည်နယ်ရောက် စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်သူများပြား
ပုသိမ်မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးမှူး ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် သေဆုံး
ယနေ့ ကိုဗစ်ကူးစက်သူ အသစ် ၄၃၇၇ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၇၁ ဦး ရှိ
နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကို PDF- နမ့်ခမ်းက ကျည်ဆံနဲ့ သတိပေးစာပေးပို့
အောက်ဆီဂျင်စက် ပြည်ပမှတင်သွင်းရာတွင် FDA ထောက်ခံချက်နှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်မလိုတော့
လှည်းကူးမှာ တစ်အိမ်တက်ဆင်း မီတာလိုက်ကောက်၊ မဆောင်ရင် မီးဖြတ်မယ်လို့ ဆို
ရုရှားထံမှ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၂ သန်းတောင်းခံထားဟု အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ပြော
ရန်ကုန်ထောက်ကြန့်တွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်၊ တစ်ဦးသေဆုံး၊ မည်သည့်ဖက်ကသေဆုံးသည်မသိရ
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်
နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသူ ၈၉၉ ဦးနှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရသူ ၅၁၇၃ ဦးရှိဟု AAPPထုတ်ပြန်ထား
တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းအပေါ် လက်မခံကြောင်း KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်နယ်ဒါးမြ ပြော
လက်နက်အထောက်အပံ့ရဖို့ ကရင်နီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်က မျှော်လင့်နေ
ပုလဲမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် P-PDF တိုက်ပွဲဖြစ်၊ စကစ ၁ယောက်သေ၊၅ယောက်ဒဏ်ရာရ
မြိုင်နှင့်ပုလဲ PDF ပူးပေါင်း၍ စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကို တိုက်ခိုက်၊ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၂၀ ကျော်သေ
KNLA တပ်မဟာ-၅ နယ်မြေမှာ တိုက်ပွဲ၆ကြိမ်ဖြစ် စကစ ၁၀ဦးသေ
လွိုင်ကော်တွင် သေနတ်ပစ်သံ ၃ချက်ခန့်ပြန်ကြားရ
ကျောက်ဆည်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်စွဲရာ အဆောက်အဦကိုမီးရှို့၊ ရဲစခန်းရှေ့ဗုံးဖောက်ခွဲ
ရန်ကုန်သန်လျင် မြို့နယ်လျှစ်စစ်ရုံးတွင် ကျယ်လောင်သော အသံနှင့်အတူ ဗုံးကွဲ၊ စစ်ကောင်စီတပ်များက ပိတ်ဆို့ထား
နွားထိုးကြီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်စွဲထားတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးရုံးထဲ မနက် ၆ နာရီက ဗုံးပေါက်ကွဲ
နွားထိုးကြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးရှေ့ မနက် ၈ နာရီကျော်က ဗုံးပေါက်ကွဲ၊ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိ
ယင်းမာပင်မြို့၊ လက္ကပြားရွာမှ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ သတင်းပေး ဒလန်အကြီးစား ဦးအောင်ဆန်း သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရ
မန္တလေးတွင် မီတာခကောက်သူ ၂ ဦး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရ၊ ၁ ဦး သေဆုံး
ခင်ဦးမြို့မှာ အရက်မူးပြီးစိန်ခေါ်နေတဲ့ ပျူစောထီး ဝင်းကျော် ဆိုသူ မနက်က ဓားခုတ်ခံရလို့ သေ
မင်းတပ်ပြည်သူများ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှု ကြုံတွေ့နေ
ရှမ်းမြောက်ကျောက်မဲ စစ်ရှောင် ၁၀၀၀နီးပါး ဆေးဝါးရိက္ခာ လိုအပ်
တရားဝင်မှုရရှိရေး စစ်ကောင်စီက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို သယံဇာတထုတ်ရောင်းနေ
ရန်ကုန်ရှိ အောက်စီဂျင်စက်ရုံအချို့ကို လူပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းချခွင့်ပိတ်သိမ်း
အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံအချို့ ပိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် အောက်ဆီဂျင်ရရှိရန်အခက်အခဲဖြစ်လာပြီး ဈေးများအဆမတန်ခုန်တက်
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကျောင်းကုန်းကြီးရွာနေ လင်မယား ၂ ဦး ဖမ်းခံရ
ဧရာဝတီတိုင်းမ် သတင်းထောက်ကိုအောင်မြသန်း ထောင်ကလွတ်ပြီး ၁၀ ရက်ကြာ ပြန်အဖမ်းခံရ
ကနီမြို့နယ်တွင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၁ ဦးကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်။
အမ်းမြို့တွင် မြေမြှုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အမျိုးသား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
ရန်ကုန်က လမ်းမကြီးတွေကို ၁ နာရီနီးပါကြာ စစ်ကောင်စီ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့
မြောင်းမြမှာ အပြင်ထွက်ခွင့်ကဒ်တွေ စစ်ကောင်စီခန့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက ၅၀၀နဲ့ရောင်းနေ
စစ်ကောင်စီကပစ်လို့ မိုးဗြဲမှာ နေအိမ် ၈၈ လုံးပျက်ဆီး
မကွေးမြို့၌ အချုပ်သား ၁၀ ဦးအပါဝင် ကိုဗစ်- ၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၄၀ တွေ့ရှိ
Stay at Home မြို့တို့မှ ပေါင်းတည်ပြန်လာသူများ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လျှင် ကိုယ့်စရိတ်ဖြင့်ကိုယ် ဆေးကုရမည်
မူဆယ်မှာ ၁၀၅ မိုင်တွင် အေးဂျင့်များအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ကူးစက်ခံရသူ အယောက် ၁၀၀ ရှိလာ
အောက်ဆီဂျင် မလုံလောက်လို့ ကလေးမြို့မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးနှုန်း ဆက်တိုက်တိုးလာနေ
နပတတွင် COVID အတည်ပြုလူနာ ၃၀၀၀ ကျော်ထိရှိ၊ ရဲတပ်ရင်းများနှင့် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာတို့တွင် အများဆုံးဖြစ်
အင်းတကော် အခြေစိုက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တပ်အတွင်း တပ်ရင်းတစ်ခုလုံး COVID-19 ကူးစက်ခံရ
ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ ကိုဗစ် ကူးစက်ပြီး သေဆုံးရတဲ့ လူနာ အရေအတွက် ဆက်တိုးလာတဲ့ အကြောင်း
နေအိမ်မှာ နေထိုင်ရေး Stay at Home ၁၈ မြို့နယ်ထပ်တိုးခဲ့
ယနေ့ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၃၄၆၁ဦး၊၈၂ဦး သေဆုံး
အာဏာရှင်ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် လူငယ်တိုင်းမှာရှိလာ။
ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့်အလုပ်ခန့်မည့်ကိစ္စ ပညာရှင်များကို စော်ကားခြင်းဖြစ်ဟု ဆရာဝန်များပြော
စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရန် ရန်ကုန်အခြေစိုက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း
လှိုင်သာယာ ဗိုလ်ချုပ်မှတ်တိုင်အနီး ဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသားအလောင်းတွေ့ရှိ
ကြက်သွန်နီအတွက် အခြေခံဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးဖို့ စကစလက်အောက်ခံ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်နေ
ပုသိမ်ကြီးတွင် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်၊ CDM ယာဉ်ထိန်းတစ်ဦး ကျဆုံး
ခင်ဦးမြို့နယ် ကံသစ်ရွာတွင် အမျိုးသား ၁ ဦး ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခံရ
M1 Group သို့ တယ်လီနော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ရောင်းချမှု မြန်မာလူထုအတွက် ရေနစ်ရာ ဝါးကူထိုးသည့်လုပ်ရပ် ဟု ဝေဖန်
စစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းသော လင်္ကာရည်ကျော်၏ဝတ္ထုကို သင်ရိုးမှ ဖြုတ်ပေးရန် မြန်မာစာကျောင်းသားများက NUG အစိုးရထံ တောင်းဆို
မြိတ်မှာ မေလအတွက် လျှပ်စစ်မီတာမဆောင်သေးသူ ၃,၀၀၀ နီးပါးအထိရှိနေ
ရခိုင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများ နှစ်ပါတ်ကြာ ရပ်နားမည်
စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဏ်တွေ ငွေထုတ်မပေးနိုင်လို့ တင်ဒါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါး ရပ်ဆိုင်းသွား
ငှက်ပျောကားဝင်ခွင့် တရုတ်ပိတ်၊ လွယ်ဂျယ်၌ ငှက်ပျောကားရာချီပိတ်မိ
ဥသျှစ်ပင်မြို့ ၌ မီတာခမဆောင်သည့်နေအိမ် မီးကြိုးများကို လိုက်ဖြုတ်နေ
နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသူ ၈၉၉ ဦးနှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရသူ ၅၁၇၃ ဦးရှိဟု မနေ့က AAPPထုတ်ပြန်ထား
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မြနန်းဘုံသာလမ်းခြံကို ဝင်ရှာချိန်မှာ ရှာဖွေဝရမ်းရော ရှာဖွေပုံစံ ပါ မပါခဲ့တဲ့အကြောင်း ဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူး လင်းထွဋ်ဦး က ဇူလိုင် ၁၂ ရက် ရုံးချိန်းမှာ ထွက်ဆိုခဲ့
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ကောင်စီက အဂတိလိုက်စားမှုအမှုလေးခုနဲ့တရားစွဲထား
" အောက်ဆီဂျင် နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုဂ္ဂလိက ပိုင်တဲ့ဟာကို ကန့်သတ်တာရှိပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းကိုဖြည့်မပေးဘဲနဲ့ အဓိကလိုအပ်တဲ့ဆေးရုံတွေကိုသာဖြည့်ပေးဖို့ ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်။ တကယ်လိုအပ်သူတွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရဲ့ ထောက်ခံချက်နဲ့သွားရောက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ်၊ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လိမ်လည်မှုတွေရှိနေကာ ပြည်သူတွေကလည်း မလိုဘပ်ဘဲ အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်နေတဲ့အတွက် ကန့်သတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်" ဟု အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ပြောခွင့်ရ ဇော်မင်းထွန်းက ပြောဆို
မလိုအပ်ဘဲ ပြည်သူများ အောက်စီဂျင်ဝယ်နေ၍ ကန့်သတ်ဟုဆို
မုံကိုးဒေသ ချီတက်လှုပ်ရှားလာတဲ့ အကြမ်းဖက် လူသတ်စစ်ကောင်စီတပ်အား MNDAA မှ စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်သဖြင့် ထိခိုက်သေဆုံးမှုများ
အောင်မြေ (၁) ကျေးရွာ စခန်းချထားတဲ့ အကြမ်းဖက် လူသတ်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် သူ့လက်အောက်ခံ လီဆူပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အား KIA မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်
ဖားကန့်-ဆိုင်းတောင်လမ်းတွင် အကြမ်းဖက် လူသတ်စစ်ကောင်စီတပ် ရဲကား (၁) စီးအား KIA မှ မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်
လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်း ကရင်နီတပ်မတော် နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ တစ်ရက်အတွင်း တိုက်ပွဲ ၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွား
ဇွန်လတွင်း စကစ ၁၅၆ ဦး သေဟု KNU တပ်မဟာ ၅ ပြော
ပြည်သူလူထုကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ စကစ၊ စရဖ၊ ရဲနဲ့ ဒလန်တွေကို လက်တုန့်ပြန်သွားမည်ဟု လားရှိုး (PSDA)က ထုတ်ပြန်
သျှမ်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ၊ သျှမ်းပြည်ဖယ်ဒရယ်တပ်ဦးက အကြမ်းဖက် မအလ စစ်ကောင်စီတပ်ကို စစ်ကြေညာ
ဝိုင်းမော်တွင် KIA ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အသေအဆုံးများတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ် ခမရ ၃၂၁ ၏ လက်နက်များ သိမ်းမိ
PDF တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံသို့ ထိုင်းAAC မဟာမိတ် အဖွဲ့ က ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ လှူဒါန်းပြီးပြီ
အင်းစိန် EPC ရုံးပေါက်ကွဲမှု့ဖြစ်ပွား ခဲ့
ခင်ဦးမြို့နယ်တွင် အကြမ်းဖက် စကစတပ် သတင်းပေး ဒလန်အကြီးစား (၁) ဦး အသတ်ခံရ
ဒီးမော့ဆိုတွင် တပ်စွဲထားတဲ့ အကြမ်းဖက် လူသတ်စစ်ကောင်စီတပ်အနီး လူသေအလောင်းများ တွေ့ရှိ
ကနီမြို့နယ်ယင်းရွာမှ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၁၅ဦးခန့်ကို အကြမ်းဖက် စကစတပ်အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်၊ အလောင်းများအောက်တွင် မိုင်းများ ထောင်ထားခဲ့
မန္တလေးတွင် CDM ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်သား ခန့်ကိုကိုမောင်ကို စစ်ကောင်စီတပ်များက ပစ်သတ်ပြီး CDM ရဲ ၅ ဦးကို ဖမ်းဆီး
သုံးခွမှာ အောက်ဆီဂျင်လိုက်ရှာသူတစ်ဦး စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် သေဆုံး
မိုးညှင်းမြို့တွင် ပျုစောထီးအဖွဲ့က ဒေသခံမိသားစု ၄၃ စုကို သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်
ဟိုပင်မှာ ပျူစောထီးက ခြိမ်းခြောက်စာများလိုက်ဖြန့်နေ
ချင်းတွင်းမြစ်သွားရေယာဉ်တွေကို စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ပျူစောထီးအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖမ်းဆီးငွေကြေး အတင်းအဓမ္မယူ
မတူပီမြို့နယ်ပညာရေးရုံးဝန်ထမ်းမှ CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများကို ဒုတိယနှင့် တတိယ အသုတ်အလုပ်ရပ်ဆိုင်းစာ ထုတ်ပြန်
NLD ဦးဉာဏ်ဝင်း အင်းစိန်ထောင်မှာ COVID ကူးစက်ခံရ
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၌ သံဃာတော် ၄၉ ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိ
ရန်ကုန်-သံတွဲ အဝေးပြေဘတ်စ်ကားနဲ့ လိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည်တစ်ဦး ရုတ်တရက်သေဆုံး၊ စစ်ဆေးကြည့်ရာ ကိုဗစ် ပိုးတွေ့
လွိုင်ကော်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၂၂ ဦးထပ်တိုး၊ကယားတပြည်နယ်လုံး ၈၅ ဦးအထိ ရှိလာ
ပုသိမ်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ တရက်တည်း တပ်တွင်းဆေးရုံမှ ၂ ဦးအပါအဝင် ကိုဗစ် လူနာ ၂၄ ဦးသေဆုံး
မွန်ပြည်နယ်တွင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာသစ် ၃၀၂ ဦးတွေ့ရှိ၊ ၅ ဦး ထပ်မံသေဆုံး
စစ်ကိုင်းတွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများအတွက် အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေ
ရွှေပြည်သာ ကွာရန်တင်းစင်တာတွင် အစားအသောက်နှင့် နှာခေါင်းစည်းကအစ ဝယ်သုံးနေရ
မူဆယ်တွင် ၉ နှစ်အရွယ် ကလေးအပါအဝင် ၄၉ ဦး ပိုးတွေ့၊ ၂ ဦးသေဆုံး
တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးနီးပါး COVID-19 ကူးစကခံရသည့် အင်းတကော်တပ်၌ ကိုဗစ်လူနာအများစုမှာ တပ်တွင်းနေအိမ်များ၌ နေထိုင်ကာ ကုသမှုခံယူနေရ
ကိုဗစ်လူနာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အောက်စီဂျင်အရေးပေါ်လိုနေ
ယနေ့ပိုးတွေ့လူနာ ၅၀၁၄ဦး ၊သေဆုံး ၈၉ဦး
NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ ကော်မရှင်စုံညီအစည်းအဝေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်မယ်
ထားဝယ် တပ်ပေါင်းစုသပိတ်စစ်ကြောင်း ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခံရ
မော်လမြိုင်တွင် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် လူစုလူဝေးဖြင့် လာထုတ်
ဇွန်လကုန်ပိုင်းနှင့် ဇူလိုင်လဆန်းအတွင်း တိုက်ခိုက်ဖောက်ခွဲမှုပေါင်း ၂၀ ကျော်လုပ်ခဲ့ဟု မန္တလေး PDF ပြော
နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ မီတာခ ဆောင်ကြဖို့ စကစပြော
နိုင်ငံအနှံ ပြည်သူများ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံဖြင့် စစ်ကောင်စီကို ဆက်လက် ဆန္ဒပြနေဆဲ
နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသူ ၉၀၂ ဦးနှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရသူ ၅၂၀၃ ဦးရှိဟု မနေ့က AAPPထုတ်ပြန်ထား
၁၃. ၇. ၂၀၂၁
အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်ခွင့် ရ၊ မရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်မသိရသေး
KNDF - Loikaw Zone မှ ယမန့်နေ့ ၉:၂၀ တွင် ခရိုင်ရုံးနဲ့ EPC ရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ မိမိတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ​ထုတ်​ပြန် ၊ စကစအဖွဲ့ဝင် ၂ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့
ကနီမြို့နယ်က အသတ်ခံရသူတွေအတွက် ဆက်ပြီး ခုခံတွန်းလှန်မယ်လို့ PDF အဖွဲ့ပြော
စိုးရိမ်တတ်တဲ့ ကုလနဲ့ နိုင်ငံတကာ
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာကို ထည့်သွင်းဖော်ပြ
မြန်မာနိုင်ငံ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု အန္တရာယ်အများဆုံးနိုင်ငံများတွင် ပါဝင်၍ အမေရိကန်က ထပ် အရေးယူမည်
ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက မြန်မာတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူများ အပြစ်ပေး အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
ကသာမြို့မှာမနေ့ ည ၇ နာရီခန့်က မြို့နယ်ကြံ့ဖွတ်ရုံးနဲ့ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ နေအိမ်တွေမှာ ဗုံး ကွဲခဲ့
ကနီဒေသခံ(၁၆)ဦးကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ပြီး ရွှေငွေယူသွား
မိုးကုတ် သပိတ်ခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနှင့်သမီးကို ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်စီ ချမှတ်
မတ္တရာမြို့နယ် ကောက်ရိုးပုံရွာကို စစ်ကောင်စီတပ်များ ဝင်ရောက်ရှာဖွေ၊ ပြည်သူအချို့ ထွက်ပြေး
စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသည့် ထားဝယ်သပိတ် ဖြိုခွင်းခံရ၊ပြည်သူများ ဘေးကင်း
မန္တလေးသပိတ်စစ်ကြောင်းမှ လူငယ် ၇ဦးဖမ်းဆီးခံရ၊ ၁ဦးမှာ ခြေထောက် သေနတ်ဒဏ်ရာရထား
တမူးတွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်က လူငယ် ၂ဦးကို ရိုက်နက်ပြီး ဖမ်းဆီးသွား
တမူးတွင် ချင်းလူငယ် ၄ ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်များက သတ်ဖြတ်၊ အလောင်းများအားလုံး မိသားစုထံ ပြန်မပေးဘဲ သဂြိုလ်
မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်ရေးရာမူဝါဒရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းကော်မတီဝင် ကိုအန်းကူ အပါအဝင် ၄ ဦးကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် လိမ်လည်ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဖမ်းဆီးထား
မင်းကင်းတွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်က သံပေါက်ရွာကို လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ပြီး ဦးမြင့်ဆွေကို သတ်ဖြတ်ဟု ပြော
မြိတ်မြို့နယ် သာရမဲရွာက NLD ရပ်ကွက် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ CDM ဆရာမ သုံးယောက် ဖမ်းဆီးခံရ
မိတ္ထီလာခရိုင်၌ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ ထွေအုပ် ၃ ဦး၊ လ.ဝ.က ၂ ဦး၊ မြေစာရင်း၁ ဦး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်
မော်လမြိုင်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးများနှင့်ရဲစခန်းအားလုံးနီးပါး ကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရ။
ကိုဗစ်-၁၉ ကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးချနေသည့် စစ်ကောင်စီကို NUG သတိပေး
ပုသိမ်တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်း ၁၀ ဦးကျော် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သဖြင့် ဘဏ်ပိတ်ထားရ။
ရေဝေးသုဿာန်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ကြောင့် ပုံမှန် တစ်ရက်ကို ရာနဲ့ချီ မီးသင်္ဂြိုဟ်နေရပါတယ်
သရက်မြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်းများ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသဖြင့် ဘဏ်အချို့ခေတ္တပိတ်ထား
ကျောက်ဖြူတွင် ခရိုင်အဆင့်ရှိ အရာရှိ ၂ ဦး ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံး
မိုးကုတ်တွင် ကိုဗစ်လူနာထားရန် နေရာအခက်ခဲကြောင့် ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမှု ရပ်နားထား
ကန်ကြီးထောင့်တွင် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၇၁ ဦးတွေ့၊ လူနာ ၁ ဦး သေဆုံး
ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကြောင့် တစ်ရက်တည်း သေဆုံးသူ ၁၀၀ ကျော်၊ ကူးစက်သူ အသစ် ၄၀၄၇ ဦးတွေ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြင်တွေ့လိုဟု ထိုင်းအာဏာသိမ်းအစိုးရပြော
တယ်လီနောထွက်တာ ပြည်သူတွေနစ်နာတယ်လို့ ပညာရှင်တွေသုံးသပ်
မြန်မာသံအမတ် ဦးကျော်မိုးထွန်းကို ပြန်လွှဲပေးဖို့ အမေရိကန်ကို စစ်ကောင်စီ ထပ်ပြောထားတယ်လို့ဆို
ကန်ကြီးထောင့်တွင် မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်ပိတ်ပြီး လော့ဒေါင်းပုံစံပြုလုပ်ထား
ကနီမြို့နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်မီတာခ မဆောင်ပါက မီးဖြတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်
နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသူ ၉၀၆ ဦးနှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရသူ ၅၂၃၉ ဦးရှိဟု မနေ့က AAPPထုတ်ပြန်ထား
၁၄. ၇. ၂၀၂၁
ယနေ့ အထူး မှတ်သားဖွယ်
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ အာဏာမသိမ်းမီက ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ၁.၇ ရာနှုန်းရှိရာက စစ်ကောင်စီလက်အောက် ၆လနီးပါးကြာပြီးနောက် ကူးစက်နှုန်း ၃၅ ရာနှုန်းထိ မြင့်တက်သွား
စစ်အာဏာမသိမ်းမီ ဇန်နဝါရီ ၃၁ရက်မှာ ကိုဗစ်နဲ့ သေဆုံးသူ ၆ယောက် ရှိရာမှ ယနေ့တော့ ယနေ့တစ်ရက်တည်း (၂၄နာရီအတွင်း) သေဆုံးသူ ၁၄၅ ယောက် ရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
ယမန်နေ့က မကျည်းစုရွာမှ ရွာသူရွာသား ၅ ယောက်အား အဓမ္မဖမ်းဆီးသွား
ရွာအချို့ ၂၅ရက်နေ့မတိုင်မီ မီတာဆောင်ရန် စခများ လိုက်လံခြိမ်းခြောက်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စိုးရိမ်ပူပန်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို တောင်းဆိုတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ကန်က ပြော
ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ မဆိုင်တဲ့ပြည်သူအများအပြားကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆန္ဒပြပွဲနှိမ်နှင်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး အာဏာဖီဆန်မှုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတဲ့ ခလရ(၄၈) တပ်မတော်သားတစ်ယောက်က ပြောဆို
"ကျနော်တို့ ပရဟိတသမားတွေ အခုထက်ထိ အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။လှိုင်သာယာဘက်က ပရဟိတသမားတွေ လှိုင်သာယာမှာ အလောင်းတွေကောက်ရင်း အဖမ်းခံထားရတာရှိတယ်။ ဒါတွေကို ရက်ရက်စက်စက် လူမဆန်အောင် ရိုက်နှက်ညှဉ်းဆဲပြီးမှ မတောင်းပန်ဘဲ အခုမှ စစ်ကောင်စီက ကူညီကြပါတဲ့လား။ ကျနော်တို့ဟာကျနော်တို့ နိုင်သလောက်ဆက်ကူမယ်။ သူတို့ စစ်ကောင်စီ လူရမ်းကားတွေနဲ့တော့ မပူးပေါင်းပါဘူး။ တောင်းပန်မှုလည်းမရှိဘဲ လိုချိန်မှ လာကြပါဆိုတောက အရမ်းကို စိတ်နာစရာပါပဲ" လို့ လှိုင်သာယာအခြေစိုက် ပရဟိတသမားတစ်ဦးက ဆို
"ကျည်ဆန်မသုံးဘဲ လူသတ်နေတာ။ တမင်သက်သက်ကို လုပ်နေတာ"ဟု သန်လျင်မြို့နယ်မှ ကိုဗစ်လူနာရှင်တဦးက ပြော
ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ရေး စစ်ကောင်စီမလိုလားဘဲ သွေးထိုးနေဟု KNDO ထုတ်ပြန်
၁၂၊၁၃ရက်အတွင်း KNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ရက်အတွင်း တိုက်ပွဲ ၈ ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီမှ ၁၁ ယောက် သေဆုံး၊ ၁၆ ယောက်ဒဏ်ရာရ ဟု KNU ထုတ်ပြန်
၁၂ရက်နေ့ လွိုင်ကော်တိုက်ပွဲတွင် အကြမ်းဖက် လူသတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ (၁၄) ဦး သေဆုံး
ယမန်နေ့ည ၉ နာရီခန့်က မင်းကင်းမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ယနေ့ ညနေက ဖားကန့်ဘက်သို့ စစ်ကြောင်းထိုး ချီတက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်အား KIA မှ စောင့်ကြို ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်နောက်လိုက်များကို တိုက်ခိုက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်းသို PDF ကြေညာ
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် စည်ပင်စက်သုံးဆီဂိုထောင်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်။
တောင်ကြီးတွင် ပြည်သူ ၃ယောက်ပစ်သတ်ခံရပြီး EPC ရုံးရှေ့ ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်မှူး ကားပျက်စီး
မြစ်ငယ် မြို့မရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပစ်ခတ်ခံရသဖြင့် သေဆုံး
မိုးကုတ်မြို့တွင် စစ်တပ်အရာရှိဟောင်း ၁ ဦး ပစ်သတ်ခံရ
မြောင်မြို့နယ် ပျူစောထီးများဖြစ်သော ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်ဟောင်းဦးဝင်းနိုင်နှင့်တပည့်တစ်ဦးကို ဓားဖြင့်ထိုးပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သွား၍ သေဆုံး
ကနီမြို့နယ်တွင် စစ်တပ်၏သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ပြည်သူ ၂၇ ဦး ထက်မနည်းသေဆုံး
မန္တလေးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်က ပစ်ခတ်သဖြင့် လူငယ် ၁ ဦး သေဆုံး
ငါးသိုင်းချောင်းမြို့တွင် လူငယ် ၂ ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်က ဖမ်းဆီး
ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်၌ ထန်းတက်တောင်သူ ၁ ဦးကို နယ်မြေခံရဲက ပစ်သတ်
ဂန့်ဂေါမြို့နယ် နှမ်းခါးရွာတွင် စစ်ကောင်စီတပ်က အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ သတ်ဖြတ်စားသောက်
ဘီးလင်းမြို့နယ်တွင် စကစဘက်မှ BGF တပ်များ အင်အား တပ်ချိန်း၊ ရွာအတွင်း ရမ်းသန်းပစ်ခတ်၍ ရွာသား ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ
ထားဝယ်က အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မောင်ကျော်မင်းလတ် စစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့ သေဆုံးခဲ့ပေမယ့်လည်း တရားစွဲခံထားရ
တောင်ကြီးတွင် အိမ်စီးကားတစ်စီးကို စစ်ကောင်စီတပ်များ လိုက်လံပစ်ခတ်ရာ ကားပေါ်ပါ ပြည်သူ ၃ ဦးသေဆုံး
ယင်းမာပင်တွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာများလာသဖြင့် နေရာနှင့်ဆေးစစ်မှုအပိုင်း အခက်အခဲဖြစ်နေ
မင်းတုန်းတွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအချို့ ထပ်မံကူးစက်ခံရ
ရှမ်းပြည်နယ်၌ ၁၂ ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်သူ ၄၀၀၀ ကျော်ရှိ၍ ၄၁ ဦးဆုံးပါးခဲ့
မန္တလေးတွင် ဆရာတော် ၁ ပါး အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာနှင့် သံသယရှိသူ ၄၀ ဦး သေဆုံး
သုဿာန်တွေမှာ ရုပ်အလောင်းတွေ အဆမတန်များ မနိုင်မနင်းသင်္ဂြိုဟ်ရ
အင်းစိန် ထောင်ပိုင်ကြီးဟောင်း ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရ
မိုးညှင်းမြို့တွင် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် မိုးညှင်းမြို့နယ်ရဲမှူး၏ဇနီး ပထမဦးဆုံး သေဆုံး
ရန်ကုန်မှာ အောက်စီဂျင် မရလို့သေဆုံးသူတွေများနေ
Covid-19 ထောက်ပံ့ငွေရရှိလို့ ငွေလွှဲခ ကြိုတင်ပေးဆောင်ရန်ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှုတွေရှိလာ
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ကြောင့် ရုံးပိတ်ရက် ၉ ရက် ဆက်တိုက်ပိတ်မည်ဟု စစ်ကောင်စီကြေညာ
ယနေ့ ကိုဗစ်လူနာသစ် ၇၀၈၃ ဦး၊သေဆုံး ၁၄၅ဦး
စစ်ရေးနဲ့ ကိုဗစ်ကြား မြန်မာပြည်သူတွေ ဗျာများနေရ
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အပါအဝင် ၉ ဦးကို ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ NUG ထုတ်ပယ်
လားရှိုးမြို့တွင်း အဝင်အထွက် စတင်ပိတ်ထား၊ထောက်ခံစာပါလည်း ခွင့်မပြုတော့
ရန်ကုန်တွင် အောက်ဆီဂျင်ပုံမှန်ရသည့်နေရာ ၁၀ နေရာခန့်သာရှိ
မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက်မည့် ခရီးသွားများကို စင်ကာပူ ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်
ကြယ်ဂေါင် နဲ့ရွှေလီ မှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံနေရ။
ကချင်အထူးဒေသ ၁ နယ်မြေ ပန်ဝါ၊ ဖီမော ဝင်ပေါက်တွေကို ယာယီပိတ်သွားမည်
ရန်ကုန်မြို့တွင် ကြက်ဥဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာမြင့်တက် ပြတ်လပ်နေ
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ကချင်အထူးဒေသ အ၀င်ဂိတ်များ ယာယီပိတ်
ထိုင်းနိုင်ငံကို တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းသား ၂၆ ဦး အဖမ်းခံရ
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မြန်မာအပါအ၀င်အာရှနိုင်ငံများထံ တရုတ် အောက်စီဂျင်စက်များရောင်းကောင်းနေ
အမေရိကန်-အာဆီယံ အထူးအစည်းအဝေး ၀ဏ္ဏမောင်လွင်တက်ခွင့်ရ၊ အမေရိကန်က မြန်မာကို အရေးယူရန် အာဆီယံကို ဖိအားပေး
စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ဝိုင်းကူဖို့ စစ်ကောင်စီ အကူညီတောင်း
နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့ရသူ ၉၁၁ ဦးနှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရသူ ၅၂၅၇ ဦးရှိဟု ယနေ့ AAPPထုတ်ပြန်ထား
Khaing Tuu July 14, 2021 at 9:55 PM
credit ပေးဦးလေ ဘဒို